qaxooti - ALinks
Maqaallada ku saabsan qaxootiga
Sidee shaqo looga helaa Maco?
Waxaa laga yaabaa 25, 2021 Antika Kumari shaqo, qaxootiga, safarka, waxyaabo waxtar leh
Macau waa dhul iskiis isu xukuma oo ku yaal xeebta koonfureed ee Shiinaha, kuna taala dhinaca Delta Pearl River Delta oo ka timaadda Hong Kong. Marinka Cotai, oo isku xira jasiiradaha Taipa iyo Coloane, wuxuu ku kasbaday moniker-ka "Las Vegas of Asia"
Qaxootiga Siiriya: Ogow wadamada soo dhaweynaya iyaga!
November 3, 2020 Karuna Chandna qaxootiga, Suuriya, safarka
Shuruudaha fiisaha ee muwaadiniinta Suuriya waa xaddidan gelitaanka maamulka. Iyaga ayaa ku soo rogay mas'uuliyiinta Gobollada kale. Laga soo bilaabo 1 Oktoobar 2019, dadka Suuriya waxay haysteen fiiso ama fiiso la'aan fiisaha 29 dal. Sidoo kale, dhulalka helay kaalinta 107-aad
Codso Magangelyo: Shiinaha. Halkan Ogow !!
October 31, 2020 Karuna Chandna Shiinaha, qaxootiga
Xafiiska UNHCR wuxuu ku yaal Beijing. Waxaa la aasaasay 1980s. Qaxooti ayaa ku sugnaa Shiinaha ilaa waqtigaas. Magangalyo-doonka Shiinaha waxaa aqoonsan oo ilaaliya dowladda Shiinaha. Dalbo Magangalyo: Shiinaha. Sida laga soo xigtay UNHCR,
Codso Magangalyo Jarmalka!
October 27, 2020 Karuna Chandna Germany, qaxootiga
Codsashada magangalyada waxay noqon kartaa mid dheer oo dhib badan. Ogow halkaan sida aad uga dalban karto magangalyo gudaha Jarmalka. Sidee ayaa xaaladda Jarmalka go'aan ka gaari doontaa? Mudada aad joogi karto Jarmalka waxay kuxirantahay howsha magangalyada. Si loo bilaabo
Sida Loo Dalbado Magangalyada Spain: Nidaamka Magangalyada Isbaanishka
September 28, 2020 Shubham Sharma qaxootiga, Spain
Haddii aad ku sugan tahay Spain ama meel ka baxsan Spain, waxaad codsan kartaa magangelyo ama badbaadin labada xaaladoodba. Waxaa jira waxyaabo ama talaabooyin gaar ah oo aad u baahan tahay inaad raacdo inta aad codsaneyso magangelyo. Laakiin tallaabada ugu horreysa, waa inaad u baahato
Sidee Loo Dalbadaa Magangalyo Chile? Ogow halkaan!
September 15, 2020 Karuna Chandna Chile, qaxootiga
Wasaaradda Arimaha Dibada & Arimaha Gudaha ayaa go aansatay in qaxootiga loo celiyo dalka Chile. Iyadoo lala kaashanayo Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga (UNHCR). Waxay kaloo dejiyeen yool sanadle ah oo dib u dejin ah. Kiisaska la xushay waxay ku jiraan arji warqad ah. Markay jiraan
Sidee looga codsadaa magangalyada Mareykanka?
September 14, 2020 Antika Kumari qaxootiga, USA
Sannad kasta dadku waxay u yimaadaan Mareykanka iyagoo raadinaya badbaadin sababtoo ah waxay la kulmeen cadaadis. Waxay ula kulmi doonaan si xun ula dhaqan sababtoo ah: Xubinnimada koox bulsho oo gaar ah, Diinta. Si aad uga dalbato magangelyo ama ilaalin gudaha Mareykanka, adiga
Sidaad uga Codsan Kartid Magangalyada UK
September 14, 2020 Antika Kumari qaxootiga, UK
Haddii aad rabto inaad ku noolaato Boqortooyada Midowday ahaan qaxooti ahaan, waxaad u baahan tahay inaad ka codsato magangelyo Ama badbaadin UK. Waxaad ka qaxi laheyd qaranka inaad uqalanto oo aadan rabin inaad dib ugu laabato adiga dartii
Sida Loogu Codsado Magangalyo Sacuudi Carabiya
September 8, 2020 Maitri Jha qaxootiga, Saudi Arabia
Sacuudi Carabiya sidoo kale ma laha siyaasad dhameystiran oo ku saabsan tahriibka. Laakiin waxaa jira sharci Iqama ah. Waxay u shaqeysaa sida sharci dejin ah oo ku saabsan xaaladda iyo xuquuqda muhaajiriinta ajnabiga ah ee waddanka jooga. Isaga ama iyadu waa inuu helaa
Sidee loo codsadaa magangalyo Belgium?
September 6, 2020 Maitri Jha Belgium, qaxootiga
Ma qorsheyneysaa inaad magangalyo ka codsato Belgium? Waxaad ka codsan kartaa magangalyo Beljam kaliya haddii aad la kulanto heshiiska qaxootiga. Sida haddii aad la kulantid cabsi ah in lagu dhibaateeyo dalkiisa. Beljamka ayaa mara UNHRC
1 2 3 4 Xogta ku xiga»